Company Nhanganyaya - Juancheng Tianma Rubber & Plastic Co., Ltd.
☆ Muna 2008, isu akawana Safety Certificate Chokutenderwa For Mining Products.
☆ Muna 2010, kambani vakanyorwa "CHENWANG" vanozivikanwa.
☆ Muna 2011, isu akawana hosipaipi ekisipoti zvinodiwa chitupa.
☆ Muna 2014, tabuda munyika yepamusoro utariri hurongwa ISO9001: 2008.
Pashure pemakore anopfuura gumi rakadzikama kukura, kambani zvino ndokwenguva nzvimbo 40.000 mativi metres uye ane 15,000 mativi mamita kwezvipimo workshop. Kune zvachose vashandi 100 uye kupfuura 10 mainjiniya, kusanganisira 5 mukuru mainjiniya. The kambani simba zvekushandisa simba, chakanakisisa tooling midziyo, zvakakwana kuvhenekwa midziyo, yepamusoro kugadzirwa rwokugadzira uye
akakwana yepamusoro Kwevadzidzi. Kugadzirwa yedu pagore vachikwanisa ndiyo 6million metres pamwe yakatsiga uye yakavimbika unhu.
Tine zvakawanda uye nokurondedzerwa mishonga yakakwana. The zvigadzirwa akakamurwa dzakanzi matatu: waya zononoka rabha hosipaipi, waya rakarukwa rabha hosipaipi uye Whitehead Textile rakarukwa rabha hosipaipi, izvo anobudiswa maererano SAE mureza, Din mureza uye GB standard.The zvigadzirwa vari zvinowanzoshandiswa mumhuri youinjiniya michini, Magetsi chokufambisa , simbi uye simbi simbi, marasha migodhi, kuvakwa, maindasitiri, munda mafuta, moto kudzivirirwa uye mamwewo. Panguva iyoyowo, zvigadzirwa vari aivigirwa kuUnited States, Europe, kuMiddle East, Southeast Asia nedzimwe nyika uye kumatunhu, uye tinogamuchirwa zvakanaka nokuda mudzimba uye vatorwa vanoshandisa.
The kambani inoomerera uzivi vanhu vaifarira, michina kutungamirira, unhu pakutanga, uye kushumira vanhu. Tinoda kuita takunda zvisamumirira pamwe neshamwari kubvira mumamiriro ose oupenyu.